पाकिस्तानमा अक्षय कुमारको ‘प्याडम्यान’ प्रर्दशनमा रोक – Everest Dainik
पाकिस्तानमा अक्षय कुमारको ‘प्याडम्यान’ प्रर्दशनमा रोक
किन समाजमा महिनावारीलाई अपवित्र मानिन्छन् ?
मुम्बई । पाकिस्तानले बलिउड क्षेत्रका सुपरस्टार अक्षय कुमारको चलचित्र ‘प्याडम्यान’ को रिलिजमा रोक लगाएका छन् ।
किस्तानी सेन्सर बोर्डका अनुसार महिनावारीको समयको यो चलचित्र संस्कृति विरुद्ध रहेको छ ।
यहीं पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरारले यसको विरोध गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन्– चलचित्रका विषय न त अनैतिक हो न त इस्लामिक । मात्र यति हो कि यसले समाजमा मानिसहरुलाई जागरुक गराउने काम गर्न खोजिरहेका छन् ।
चलचित्र प्याडम्याडले मुख्य शिक्षा के हो ? किन अभिनेता अक्षय कुमारले प्याडम्यानको भूमिक गरेका छन ? यो चलचित्रको विषयमा के कुरालार्इ बढी लक्षित गरेका छन् भन्ने कुरा जान्न आवश्यक रहेको छ । किन महिनावारीको समयलाई लिएरमहिलाहरुलार्इ अपवित्र मान्दछन् त ?
इस्लामको पवित्र ग्रन्थ कुरानमा के लेखेका छन ? के कारणले गर्दा महिनावारीको समयमा महिलालाई पुरुषसँग टाढा रहन सल्लाह दिन्छन् इस्लाम ।
कुरानका अनुसार– जब महिलाहरु महिनावारीको समयमा पुरुषहरुबाट टाढा रहनुपर्दछ । कारण यो होइन कि महिनावारीको समयमा महिलाहरु अपवित्र हुन्छन् । कारण यो हो कि किनकी महिनावारी समयको बेला महिलाहरुलाई धेरै समस्या भइरहेका हुन्छ । धेरै दुःखबाट गुज्रिरहेका हुन्छन् ।
दोस्रो पक्षको कुरा गर्दा इस्लामा महिलाहरुलाई महिनावारीको समयमा धर्म–कर्मबाट किन टाढा राख्ने गर्दछन् ? मान्यता यस्तो छ कि मोहम्मद साहबको श्रीमती आयशा महिनावारीको समयमा आफ्नो मक्काको यात्रा पूरा गर्न सक्दिनन् । त्यतिबेला मोहम्मदले भने हुनसक्छ कि अल्लाह आदमकी छोरीको लागि यही चाहन्छन् ।